यी राशि हुनेहरू निकै भाग्यमानी हेर्नुहाेस्,बाग्लुङ कालिकाकाे दर्शन गर्नुहाेस्
आईतबार, माघ ४, २०७७ Sarangi Radio Network
प्रचण्ड-नेपाललाई पार्टीमा फर्कन ओलीको आग्रह, राखे यस्ताे सर्त
केपी ओलीलाई अस्वीकार गरेर गर्न खोजेको के हो ? - नेम्वाङ
पार्टनरमाथि हावी हुने युवतीले गर्दा युवकको मृ*त्यु
प्रेम विवाह गरेका जोडीलाई युवतीका परिवारले फकाएर यति सम्म गरे
'फेरि पनि ल्याउनु पर्छ केपी ओलीलाई, देशको लागि आज अनि चाहियो भोलिलाई'
काँडाघारीमा साढे २ वर्षीया बालिका ब-ला-त्कृत
पाठ्यक्रममा मुक्तक समावेश अभियान तिव्र, मञ्चले बुझायाे शिक्षा महाशाखामा ज्ञापन पत्र
प्यास (कथा)- साजन के. सी.
प्रतिरोधी आन्दोलनमा आदिवासी जनजाति साहित्यकारहरू...
मुक्तक मञ्च पोखराले थाल्याे 'पाठ्यक्रममा मुक्तक समावेश अभियान', यस्ता छन् कार्यक्रमहरु
मंगलबार, पुस २१, २०७७ सारङ्गी न्युज
मेष - माया प्रेम तथा मित्रताको बन्धन कसिलो भएर जानेछ भने मामा तथा मावली पक्षबाट तपाईंको काममा भनेजस्तो सहयोग पाइने हुँदा मन प्रशन्न रहनेछ । शत्रु तथा प्रतिस्पर्धी हरुलाई हरेक क्षेत्रमा परास्त गर्दै भने जस्तो उपलब्धि हासिल गर्न सकिनेछ । पढाइ लेखाइमा अरुलाई किनारा लगाउँदै स्कूल तथा कलेजमा छुट्टै पहिचान बनाउन सकिनेछ । आम्दानीका स्रोतहरु फराकिला पार्दै तत्काल नयाँ व्यवसाय थालनी गर्न सकिनेछ ।
वृष- पढाइ लेखाइमा ध्यान जानेछ भने वित्तिय क्षेत्रसँग सम्बन्धित व्यापार व्यवसायमा लगानी गरी प्रसस्त आम्दानी गर्न सकिनेछ । माया प्रेमका कोपिला फक्रनेछ भने छोरा छोरीको कामदेखि प्रशन्न हुने समय रहेको छ । बौद्धिकताको प्रयोग गरी विशिष्ट व्यक्तिहरुलाई बसमा पार्न सकिनेछ ।शेयर बजारमा लगानी गरी आम्दानीका स्रोतहरु बढाउन सकिनेछ । चिठ्ठा पर्ने अधिक सम्भावना रहेको छ । समुदायको हितको काम गरी समाजमा नाम कमाउन सकिनेछ ।
मिथुन-व्यापार व्यवसायमा लगानी गर्न नसकिने तथा आम्दानी कम हुँदा आर्थिक समस्याले दिन गुज्रिनेछ । आफन्त तथा आमासँगको सम्बन्ध सुधार गर्दै अगाढि बढ्न सके फाइदा हुने योग रहेको छ । कृषि, सहकारी तथा पशुपालन व्यवासयबाट भने आम्दानी केहि मात्रामा बढाउन सकिनेछ । पढाइ लेखाइ तथा यस्तै क्रियाकलापमा राम्रो मिहिनेत गरेमात्र परिणाम आफ्नो पक्षमा पार्न सकिनेछ ।
कर्कट-दाजुभाइ तथा छिमेकीबाट सहयोग तथा उपहार प्राप्तिको योग रहेको छ । खोज तथा अनुशन्धानको क्षेत्रबाट सकारात्मक नतिजा निकाल्न प्रशस्त समय खर्चनु पर्नेछ । आफूलाई मन पर्ने भौतिक सम्पत्ति जोड्न पाउँदा मन हर्षित हुनेछ ।आफन्त तथा मनपर्ने साथीका साथ छोटो, रमाईलो तथा अर्थपूर्ण यात्रा हुने हुनाले मन प्रशन्न रहनेछ । न्यायिक निर्णयहरु तपाईंकै पक्षमा हुनेछ भने शत्रु परास्त हुनेछन् ।
सिंह - प्रेममा रमाउन चाहनेहरुका लागी समयले साथ दिनेछ भने परिवारका साथ रहेर मिष्ठान्न भोजन गर्ने अवसर प्राप्त हुनेछ । आँट पराक्रम बढेर जाने हुनाले जोसिलो काम गर्ने जाँगर आउनेछ ।राजनीति तथा समाजसेवामा समय लगानी गर्नेहरुले जनताको गतिलो समर्थन पाउने तथा पद प्रतिष्ठा पाउने समय रहेको छ । नयाँ काम गरी मनग्गे आम्दानी बढाउन सकिनेछ । व्यापार व्यवसायमा समय थोरै दिएपनि मनग्गे आम्दानी हुनेछ ।
कन्या -प्रतिष्ठित काम गर्ने अवसर आउनेछ भने विशिष्ट व्यक्तिहरु नजिकिने छन् । कन्फिडेन्ट पावर बढ्ने हुँदा उपलब्धिमूलक कामहरु बन्नेछन् । राजनीति तथा समाजसेवामा समय दिनेहरुले पद पाउने समय रहेको छ । व्यापार व्यवसाय फस्टाएर जाने तथा आम्दानीका स्रोतहरु फराकिला हुनेछन् । सुन्दर तथा विलासी सामानको प्रयोगमार्फत् अरुको ध्यान आफूतिर आकर्षित गर्न सकिने छ । प्रेममा रमाउन चाहनेहरुका लागि समयले साथ दिनेछ ।
तुला-स्वास्थ्यमा गडबडी आई दैनिक कामकाज बिग्रने खतरा रहेको छ, सचेत रहनुहोला । व्यापारमा लगानी गर्न केहि समय पर्खनु राम्रो रहेको छ । तरपनि विदेशमा उत्पादित सामानहरुको व्यापार फस्टाएर जानेछ । पढाइ लेखाइमा मन नजाने तथा अल्छि गर्नाले नतिजा बिग्रनेछ । प्रेममा एक अर्कालाई अबिश्वास गर्नाले तथा नचाहँदा नचाहँदै टाढिनु पर्दा मनमा नरमाईलो लाग्नेछ ।
बृश्चिक -व्यापार व्यावसाय फस्टाएर जाने हुनाले आउने आम्दानीले उत्साह जगाउनेछ । पानी तथा खनिज पदार्थको व्यवसायबाट मोटो रकम हात लागी हुने योग रहेको छ । प्राकृतिक स्रोत तथा पैत्रिक सम्पत्तिको प्रयोग गरी मनग्गे धन आर्जन गर्न सकिनेछ । पढाइ लेखाइमा अरुभन्दा अग्र स्थानमा तपाईंको नाम आउनेछ भने शिक्षा क्षेत्रसँग सम्बन्धित काममा विशेष रुचि बढ्नेछ ।
धनु -साङ्गीतिक माहौलमा दिन बित्ने हुँदा मन प्रशन्न रहनेछ । राजनीति तथा समाजसेवामा गरिएको लगानीबाट राम्रै प्रतिफल प्राप्त हुनेछ । मान सम्मान तथा इज्जत प्रतिष्ठामा वृद्धि हुनेछ । निति निर्माण तहमा तपाईंको सहभागिताले महत्वपूर्ण भुमिका खेल्नेछ । व्यापार व्यवसायमा प्रशस्त नाफा कमाउन सकिनेछ भने पढाइ लेखाइमा भनेजस्तो सफलता हुने हुँदा मन प्रशन्न रहनेछ । नयाँ काम पाउने तथा नोकरीमा पदोन्नतीको गतिलो योग रहेको छ ।
मकर -धर्म, संस्कृति तथा आफ्नो रितिरिवाजको जगेर्ना गर्ने काममा समय खर्चनु पर्नेछ । पढाइ लेखाइमा फड्को मार्दै नतिजा आफ्नो पोल्टोमा पार्न सकिनेछ । सामाजिक काम गरी पुरस्कृत हुने योग रहेको छ । साथीभाइ तथा आफन्तहरुको सहयोग पाइने हुनाले मन प्रशन्न रहनेछ भने नयाँ काम गरी आम्दानीका स्रोतहरु फराकिला पार्न सकिनेछ । समयले साथ दिने हुनाले मन प्रशन्न रहने तथा भाग्य वृद्धि हुनेछ ।
कुम्भ-ऋण, रोग तथा संकटको सामना गर्नुपर्नेछ भने यहि बेलामा आयस्रोतका बाटाहरु साँघुरा हुनेछन् । व्यापार व्यवसायमा समय दिन नसक्दा घाटा लाग्ने योग रहेको छ । खानपानमा विशेष ध्यान दिनुहोला, स्वास्थ्य सम्बन्धि समस्याले सताउन सक्छ । प्रेम प्रसङ्गमा रमाउन चाहनेहरुका लागि समयले साथ दिनेछैन । पढाइ लेखाइमा समय दिन नसक्दा अरुभन्दा पछि परिनेछ । आफन्त तथा दिदिबहिनी सँग स–साना कुरामा मनमुटाव बढ्नेछ । यात्रा गर्दा सावधानी अपनाउनु होला, आजको दिन मध्ययम रहेको छ ।
मीन -शुभचिन्तक तथा आफन्तको सुझावलाई मनन गरी काम गर्दा गन्तव्य पहिल्याउन सहज हुनेछ । साझेदारहरु मिलेर गरिने कुनै पनि व्यापार व्यावसाय फस्टाएर जानेछ भने मनग्गे रुपैँया पैसा कमाउन सकिनेछ । भौतिक सम्पत्ति तथा विलाशी वस्तुको प्रयोगमार्फत् भनेजस्तो आम्दानी गर्न सकिनेछ । माया प्रेममा एक अर्का बीच नजिक हुने समय रहेको छ भने जीवन साथीको सहयोगले राम्रा कामहरु गर्न सकिनेछ । पढाइ लेखाइ तथा प्रगती पथमा अगाडी बढ्ने हुँदा मन प्रशन्न रहनेछ ।
तपाईंको दिन शुभ रहोस् ।
मंगलबार, पुस २१, २०७७, ०७:००:००
जीवनशैली को अधिक समाचार पढ्नुहोस्
नमस्कार संस्कार , सूर्य नमस्कारको विज्ञान : मन र शरीरलाई फाइदैफाइदा
बिहीबार कुन राशिका लागि कति शुभ ? हेर्नुहाेस् काे कति भाग्यमानी छ ?
यी राशिफल हुनेहरू निकै धनि हुन्छन् तर यसाे गर्नुहाेस्
खाली पेटमा बिहान खानै नहुने यी ६ खानेकुरा
बुधबार, पुस २२, २०७७ सारङ्गी न्युज
कुन राशिको भाग्य कति रहेछ यसरी जाँच्नुहाेस् , हेर्नुहोस् राशिफल
आईतबार, पुस १९, २०७७ सारङ्गी न्युज
प्रचण्ड-नेपाललाई पार्टीमा फर्कन ओलीको आग्रह, राखे यस्ताे सर्त ९ घण्टा पहिले
प्रेम विवाह गरेका जोडीलाई युवतीका परिवारले फकाएर यति सम्म गरे सारङ्गी न्युज
काँडाघारीमा साढे २ वर्षीया बालिका ब-ला-त्कृत सारङ्गी न्युज
सभ्य समाज निर्माणका लागि बरेङ गाउँपालिका र प्रहरीबीच समझदारी केशवराज क्षेत्री
केपी ओलीलाई अस्वीकार गरेर गर्न खोजेको के हो ? - नेम्वाङ ९ घण्टा पहिले
ओलीको प्रतिगमनविरुद्ध जनयुद्धका अभियन्ताहरु गम्भीर हुनुपर्छः डा. भट्टराई (भिडियोसहित) बुधबार, पुस २९, २०७७
अब सडकमा उत्रनुकाे विकल्प छैन्- तुलसीदास महर्जन बुधबार, पुस ८, २०७७
यसकारण 'राजा आउ देश बचाउ' भन्दा कसम उदेक लाग्छ ! आईतबार, मंसिर २१, २०७७
हामी: अपाङ्गता अधिकार र न्याय बिहिबार, मंसिर १८, २०७७
प्रकाशक/सम्पादक प्रकाश अधिकारी
बालसाहित्य संयोजक रमेशचन्द्र घिमिरे
वरिष्ठ संवाददाता नवराज पहाडी भेषराज पौडेल विष्णुकुमार श्रेष्ठ
संवाददाता लक्ष्मी सुनार सुशान्त रेग्मी सजिना मोक्तान